Ndoupi Mugumo weKutengesa Mufuru? | Martech Zone
Muvhuro, Ndira 16, 2012 Svondo, Nyamavhuvhu 19, 2012 Douglas Karr
Maitiro ekutengesa anowanzo gadzirirwa kuwana zvimwe inotungamira kana kusimudza vatengi varipo. Imwe yenyaya dzatinowanzowana nevatengi ndeyekuti ivo vanowanzo shanda pamhedzisiro isiriyo yekutengesa fanera. Makambani mazhinji anowana vashanyi vashoma pamwedzi kuwebhusaiti yavo kupfuura zvavangade… asi dai vakakwanisa kushandura zvakapetwa kaviri sevashanyi vavanazvo, vangadai vakabudirira kwazvo.
Mazhinji matekinoroji atinoshanda nawo akavakirwa kupfupisa nguva inodiwa kushandura vateereri vakanangwa kana kuwedzera mwero wekushandurwa panzvimbo imwe neimwe panofembera fanera. Ini ndinogara ndichishamisika kuti tinoidaidza kuti fanera… ichinyanya kuve yecolander ine tarisiro huru inodonhedza nzvimbo yese. Panzvimbo pekushanda pamusoro penzvimbo yekutyaira uye kutyaira kwakawanda kunotungamira mune fanera rakazara nemakomba, iwe ungawanepi tekinoroji pasi peiyo fanera?
Heano mamwe matekinoroji… kusanganisira vamwe vedu vatengi uye vatsigiri vanobatsira:
Webmasters zvishandiso zvinopa ruzivo rwakakosha kuti ikubatsire iwe kuwedzera kudzvanya-kuburikidza nemitengo pazvinjini zvekutsvaga. Iwe uri kutoteerera kuti ingani traffic yekutsvaga inounza kune yako saiti, asi iwe unoziva izvo iyo yekudzvanya kuburikidza nemyero iri pane ako azvino masosi? Inogona kuvandudzwa here?
URL Mapfupi senge Bit.ly inogona kukupa iyo data iwe yaunoda kuti uone kuti inoshanda sei ako masocial media matipi ari. Wanga uchiziva here kuti Facebook inosefa zvinyorwa izvo vanhu vanoona vachishandisa yavo Edgerank algorithm… uye inogona kukonzeresa padiki kana kunyangwe hapana yako enhau enhau kuedza kuri kuratidzwa?
Kushambadzira otomatiki makambani senge Right On Interactive irikugadzira matekinoroji ayo anopfupisa kutenderera uye nekupa nzira dzinokubatsira kuti uwane zvibodzwa zvako kuti ugone kutaurirana navo zvinobudirira kwete batch uye blast nzira dzinogona kutyaira dzinoendesa kunze fanera.
Email makambani ekutengesa seDelivra inopa maemail neSMS masevhisi anogona kuwedzera zvakanyanya mitengo yekupindura pamwe nekudzidzisa vatengi vemazuva ano nezvekuti zvigadzirwa zvavo kana indasitiri - kuvaka chiremera, kuchengetedza uye kuwana mikana nemitobvu.
Pamhepo Ongororo mapuratifomu saSurveyMonkey (uyo akatenga mutengi wedu, Zoomerang) anogona kukupa huchenjeri hunodiwa kuti uvandudze zvakanyanya marongero ako ekushambadzira zvemukati. Nekuvandudza yako zvemukati, iwe unokwanisa kutendeseka zvakanyanya kunongedza zvinotungamira zvekutora uye kuona kuti vatengi vako vari kusevenzwa nemazvo.
Software chikumbiro zvinoshandiswa seTinderbox zvinokutendera kuti uwedzere uye uvandudze maitiro ako ekunyorera. Nekutevera mhinduro dzako uye nekunzwisisa maitiro ekuvandudza zvaunofunga, unokwanisa kutyaira shanduko nekukurumidza uye nekunyatso… zvese uchishandisa zvishandiso zvemukati zvishoma.
Sezvaunotarisa kune yako yekutengesa fanera, aripi mazano ako kubuda? Panzvimbo pekuyedza kutyaira vakawanda uye vateereri, pane mukana wakanaka wekuti hausi kushandisa vatengi uye tarisiro iwe watove nayo. Zvakakodzera kutarisa!
Tags: delivraEmail Marketingmarketing automationkurudyi pane kudyidzanasales salesnelchikumbiro chekutengesatinderbox
Muchinjikwa Bhurawuza Kuedzwa Kwakaitwa Nyore
Jan 17, 2012 pa 2: 47 AM
Izvi ichokwadi Douglas. Uye chinhu chakanyanya kukosha ndechekuti ndakanakidzwa nekuverenga chinyorwa chako zvakanyanya. kutyaira vakawanda uye vateereri, pane mukana wakanaka wekuti hausi kushandisa vatengi uye tarisiro iwe watove nayo. Chinhu chimwe chete chandakadzidza ndisati ndave munyori anonyanya kutengesa uye nguva refu Inc Magazini isati yavhota kambani yangu seimwe yemakambani ari kukurumidza kukura ndeyekuti nekushandisa matekinoroji aya munhu anogona kuwana vateereri vazhinji pawebhusaiti yekushambadzira pamhepo.
Jan 17, 2012 pa 3: 05 AM
Kutenda zvakanyanya pamashoko ako emutsa, @DanielMilstein: disqus! Uye chimbofunga kuti ruzha rungadai rwuripo kunze uko kana isu tikatarisana nekushandura nzira dzataive nadzo pane kudurura yakawanda spam kunze uko.